Te Hanatsahatra ny Fanakatonana ny Twitter Ireo Iraniana Mahery Fihetsika — Hihantsiana Ny Propagandy Saodiana · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 25 Jolay 2016 7:47 GMT
Pikantsarin'ny Twitter nosoratana tamin'ny teny Persianina fahiny Cyrus Cylinder tamin'ny horonantsari-miaina ho an'ny Twitter Farsi, manansongadina ny maha-zavadehibe ny sehatry ny fifandraisana ao Iran. Jereo ato ny lahatsary.
Mitaky fanatsaharana ny fanakatonana ny Twitter ny vondrona mahery fihetsiky ny governemanta Iraniana iray, izay matetika mitsangana lohalaharana amin'ny politika famerana ny fahalalahana maneho hevitra.
Tsy dia misy idiran'ny zon'ny mpiserasera Iraniana loatra ity fiovana fomba fijery tampoka ity. Fa manao izao hetsika izao izy ireo mba hiantohana ny herin'ny Iraniana ao amin'ilay antsoina hoe ady ao amin'ny Twitter ifanaovana amin'i Arabia Saodita.
Nandray ity fijery vaovao ity voalohany tamin'ny lahatsoratra tao amin'ny Tabnak News, tranonkalom-baovao mpandala ny nentim-paharazana naorin'i Mohsen Rezaee, mpitari-tafika taloha tao amin'ny Mpiambina Revolisionera, tamin'ny lahatsoratra mitondra ny lohateny hoe: “Tonga ve ny fotoana hanesorana ny sivana ao amin'ny Twitter mba ahafahana miditra amin'ny “ady an-tserasera” ny vondrona. Nilaza ny mpanoratra iray tsy notononina anarana fa ny antso iraisam-pirenen'ny Twitter no nanamarina ny hetsika :
Media mahomby ary mikrôfônina tena matanjaka eo amin'ny sehatra iraisampirenena ny Twitter ary talohan'ny nandraisan'ny Saodiana izany, nanjary tsy maintsy fehezin'ny Iraniana izany. Tokony omena ny mpiserasera Iraniana ireo fepetra ilaina mandritra izany fotoana izany hatramin'ny nanombohan'ny ady an-tserasera tamin'ny fomba ofisialy na tiantsika na tsy tiantsika.
Mandroso hevitra amin'ny hanesorana ny sivana ny lahatsoratra Tabnak mba hanakanana ilay antsoina hoe “hetsika ara-psykôlôjika” nataon'i Arabia Saodita amin'i Iran.
Nanomboka nanao hetsika ara-psykôlôjika tamin'i Iran tao amin'ny Twitter i Arabia Saodita amin'ny tenirohy #Iran_Supports_Terrorism_France, (Iran manohana ny fampihorohoroana ao Frantsa), miezaka manome tsiny an'i Iran noho ny fanafihana tao Nice miaraka amin'ny tohan-kevitra mahatsikaiky.
Tsy misy zava-baovao ireo olana ireo, satria efa nanana tantara lava be amin'ny fifandirana ao amin'ny faritra i Arabia Saodita sy Iran. Raha matetika i Arabia Saodita no mpitarika ny andanin'ny sektariana Sonita amin'ny adim-paritra, ny Shiita maro an'isa ao Iran kosa no mitarika ny ankilany. Tamin'ny Janoary lasa teo, notapahan'ny Saodiana ny fifandraisana ara-diplaomatika tamin'i Iran raha norobaina ny masoivoho (Saodiana) tao amin'ny firenena taorian'ny famonoana ho faty an'i Sheik Nimr, mpitarika Shiita niaro ny zon'ny Shiita tao Arabia Saodita. Nihamafy ny ady teo amin'ny firenena roa tonta.noho ireo gidragidra ifanaovan'ny firenena roa tonta ankolaka amin'ny ady an-trano Yemenita. Tamin'ny herintaona, nandrakitra ireo fanentanana nandeha tamin'izany fotoana tao amin'ny media sosialy momba ireo kaonty Twitter tantanin'ny Saodiana izay nahatonga ny fihenjanana Kiorda tao Mahabad ny Global Voices.
Manamarika ny fanombohan'ny fifangarihana ankehitriny eo amin'ny fitantanana somary antonony eo amin'ny fitondran'ny filoha Iraniana Hassan Rouhani sy ny ankolafy kaonservativa maromaro ao amin'ny governemanta Iraniana ny lahatsoratra Tabnak. Na izany aza, tsara ny manamarika fa lasa nanorina ankolafy mahery fihetsika ny Tabnak sy ny Rezaee izay matetika manakiana ireo mahery fihetsika hafa, toy ireo akaiky ny filoha kaonservativa teo aloha Mahmoud Ahmadinejad.
Talohan'ny nahatongavan'i Rouhani teo amin'ny fitondrana, matetika tononin'ny Mpitarika Faratampony Ali Khamenei ny fijerin'ny governemanta ny votoaty amin'ny aterineto. Hoy izy tamin'ny kabary iray:
Ankehitriny, misy ny aterineto, zanabolana, ary seha-pifandraisana maro hafa amin'ny fifandraisana mora. Hevitra isan-karazany no mifaninana hanjaka ao an-tsain'ny Miozolomana. Amin'izao fotoana izao anefa, ao anatin'ny sehatry ny ady isika ary miatrika fanentanana tena izy mba hisarihana ny saintsika. Tsy fatiantoka izany ady sy fanentanana izany. Raha ny marina, tombontsoa ho antsika izany. Mino aho fa handresy amin'ny ady isika raha miditra ao anatin'ny sahan'ady ary manao izay tokony tsy maintsy hatao, maka sy mampiasa ny fitaovam-piadiantsika, dia ny hevitsika islamika voatahiry ao anatin'ny toby fianarana masina. Tsy maintsy manao izany isika.
Tonga teo amin'ny fitondrana tamin'ny taona 2013 i Rouhani miaraka amin'ny fampanantenana hampitombo ny fahalalahana amin'ny aterineto. Raha nilaza ireo mpandala ny nentim-paharazana maro an'isa avy amin'ny ankilany hafa ao amin'ny governemanta Iraniana fa sarotra tanterahana izany fampanantenana izany, nahazo ny fandresena sasantsasany izy ireo.
Tamin'ny Janoary 2015, nanakana ny sivana natao tamin'ny fampiharana malaza fandefasan-kafatra tahaka ny Whats App sy Viber tamin'ny alalan'ny fanakanana ny fanapahan-kevitry ny fitsarana tsy hanatanteraka ny didy fanivanana izy ireo. Tamin'ny Janoary 2016, nitondra ny CCDOC (Komity Misahana ny Famaritana ny Votoaty Manafintohina) koa izy ireo tamin'ny fanapahan-kevitra tsy hanivana ny Telegram. Tsy zavatra kely anefa izany, satria tantanin'ny fitsarana ny CCDOC (tsy tokony hampifangaroana amin'ny Minisiteran'ny Fitsarana ao Iran) izay matetika sampana kaonservativa.
Matetika nanontany tena ny mpisera aterineto Iraniana hoe nahoana ireo fanapahan-kevitra ireo no tsy nitarina mba hanokafana ny Twitter sy Facebook, sehatra voasivana taorian'ny Hetsika Maitso 2009
Inona no maha samy hafa ny Instagram na Telegram sy ny Twitter izay ity farany ity ihany no nakatona aty Iran ?!
Mitohy ny lahatsoratra Tabnak, manasongadina indrindra ny “Malaza” amin'ny Twitter toy ny anton'ny fahombiazan'i Arabia Saodita amin'ny fanindriana an'i Iran ao amin'ny Twitter:
Raha jerena ny toe-javatra ankehitriny sy ny fijoroan'i Arabia Saodita mavitrika ao amin'ny Twitter noho ny ady ara-psykôlôjika amin'i Iran amin'ny alalan'ny lohahevitra “malaza” mamely an'i Iran, tsy maintsy manangona ireo fikambanana mpanapa-kevitra mba handinika ny fanokafana ny Twitter isika amin'izao fotoana izao.
Tsy mandeha ao Iran ny zavatra “malaza” ao amin'ny Twitter izay manamafy ireo fampielezan-kevitra sasany amin'ny haino aman-jery ara-tsosialy sasany, hatramin'ny nanakatonan'ny governemanta Iraniana ny sehatra, manakana ny Twitter tsy hitsongodia ny fangitra famantarana toerana (geolocation) misy ny vaovao malaza ao amin'ny firenena.
Tsy fantatra mazava hoe hatraiza ny antson'ny Tabnak mba hanokafana indray ny Twitter. Mpisera ao amin'ny Facebook nanomboka tamin'ny firotsahany hofidiana filoham-pirenena tamin'ny 2013 i Tabnak ary mpisera tao amin'ny Twitter nanomboka tamin'ny 2015.
Tamin'ny lahatsoratra Facebook iray tamin'ny fiandohan'ity taona ity, nahatonga ny ady teo amin'i Saodia sy Iran i Rezaee tamin'ity fanambarana nataony tamin'ny mpanjohy azy:
Ny andro nandresen'i Iran an'i #Israel, naman'i Al Saud ankehitriny, hankalaza miaraka amin'ny horakoraka “ho ela velona Iran” ny olona ao amin'ny faritra misy antsika.
Mpanjohy iray namaly ny lahatsoratr'i Rezaee, maneso ny zava-misy fa manivaka amin'ny lalàna Iraniana sy ny sivana noho ny antony ara-pivavahana izy:
Ny andro ampiasainao ny fitaovana fanivanana hanaovana fanamarinana ara-pivavahana?
Efa ela no fantatry ny Iraniana ny fifangarihan'ny fisian'ny manampahefana Iraniana ao amin'ny tambajotra sosialy voasakana ao amin'ny firenena.
Amin'ny fehi-keviny, milaza ny lahatsoratra Tabnak fa ny hany loza apetraky ny Twitter amin'i Iran dia amin'ny alalan'ny ezaka tarihin'ny Saodiana:
Ny marina dia tsy manana lafim-pitondran-tena ratsy ny Twitter fa lafim-piarovana izay nohatsaraina tamin'ny alalan'ny hetsika tarihin'ny Arabo hamelezana ny Iraniana ihany.
Mifanohitra amin'ireo antony ofisialy nomena tamin'ny 2009 izany, mampifandray ny Twitter amin'ny ezaky ny vahiny hampiroborobo ny “fikomiana” miaraka amin'ny fihetsiketsehana Hetsika Maintso.